Gaabis ah YouTube: Sida loo hoos YouTube Videos
Waxaan helay dadka isticmaala badan oo la weydiiyay sida aad hoos video YouTube ah oo ku saabsan Jawaabaha Yahoo aadan. Tusaale ahaan:
Sida aad u yarayso ha hoos YouTube videos?
Ma jiraa hab si aad yarayso xawaaraha videos markii ay ciyaareen YouTube & goobaha la midka ah?
Hoos YouTube videos? Qoob ka ciyaarka dhaqanka degdeg ah?
Sidaas darteed ma jiraa si kasta oo ay u hoos video YouTube ah? Waa hagaag, ayaa waxaa jira siyaabo kala duwan si ay u yarayso xawaaraha ciyaaro inta lagu guda jiro loo maqli karo . Laakiin haddii aad raadineyso weeyna si ay u yarayso YouTube video si joogto ah ujeedooyin kale, here're laba siyaabood: isticmaali YouTube ee Video Editor ama Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) .
Qeybta 1: Ku dar Motion gaabis la YouTube Video Editor
Qeybta 2: Ku dar Motion gaabis la Filmora Wondershare (asal ahaan Wondershare Video Editor)
Haddii aad weligaa lagu careysiisay by xawaaraha aad videos user-ahbaa on YouTube, isku day inaad ka soo video gaar ah editor. Sida YouTube ayaa intaa ku daray cusub "mooshin gaabis ah" qalab ay Editor YouTube, waxa aanu badan dhab ahaan waxa u eg mid. Halkan waa tilmaame fudud oo ku saabsan sida ay ku darto dhaqaaq tartiib ah u leh.
Talaabada 1: helaan YouTube Video Editor. Waxaad sidoo kale si toos ah u URL ah, taas oo u tegi kartaa http://www.youtube.com/editor , ama guji "Upload"> "Edit" u Video Editor tab.
Talaabada 2: Ku jiid aad video on waqtiga iyo labo gool waxa ay guji. Daaqadda pop up ka, waxaad arki doontaa "Codsiga gaabis ah" doorasho. Waxaa loo sahlo ka dibna dooro sida ay gaabis aad rabto in aad video ay u noqon. Tani waxay khusaysaa saamaynta in video oo dhan in aad soo xulay.
Haddii aad rabto in aad hoos qeybo ka mid ah video ah, dib u tab weyn ee tafatirka tago, waxaa clip video ka asalka ah iyadoo la isticmaalayo qalab tuban iyo dar saamayn gaabis-dhaqaaq ah in clip in kaliya. Waxaad markaas diyaarin kartaa clips kala duwan aad qabto in editor in la abuuro aad video final.
Talaabada 3: Sax doorasho "saamaynta Kulanka Xiisaha Leh dhinac-ilaa-dhinac ah" la video asalka ah ka dibna waxa aad ka arki kartaa sida asalka video xiisa badan marka la barbar dhigo mid ka mid ah aad u daahisay. Haddii aad ku qanacsan tahay natiijada, ku dhacay "qabtay" si loo badbaadiyo goobaha.
Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) waa aalad video tafatirka si sahlan loo isticmaalo weli awood badan kaas oo ha bilowga ah xaalkaa videos ay daqiiqo. Waxaa ka mid ah hawlaha kasta video tafatirka classic ay ka mid yihiin qabsato xawaaraha loo maqli karo, jar, dalagga, isku shaandheyn, kala jabeen iyo sidoo kale qaababka badan oo tafatir gaar ah sida Jump Goo, Muuse qasayo iyo Shift janjeeri. Haatan aan aragno sida ay ku darto mooshin gaabis ah tan software video tafatirka.
Tallaabada 1. Download YouTube la Free YouTube Downloader
First of dhan, waa inaad ogaataa in aanay tani ahayn hab lagu hoos online YouTube video. Waa in aad kala soo bixi YouTube videos si wadid aad u adag marka hore. Chine badan oo lacag la'aan ah shaqada. Tusaale ahaan, Wondershare Free YouTube Downloader iyo Video DownloadHelper (Firefox dar-on).
Tallaabada 2. Ku dar video files barnaamijka
Download iyo rakibi Video Editor oo gebi ahaanba ay taageerayaan ku soo bixi YouTube videos (sida caadiga ah ee FLV). Waxaad sidoo kale riixi kartaa "Import" on daaqadaha hoose dooro YouTube FLV file video ka your computer, ama si fudud u jiidi oo hoos u YouTube FLV file in User ee Album. Next, jiidi YouTube video ka User ee Album in waqtiga loogu talagalay tafatirka.
Tallaabada 3. Hal click ku darto mooshin gaabis ah
On Timeline ah, click double ku saabsan video YouTube ku daray in la furo guddi video tafatir ah. Waxaad arki doontaa wax doorasho Speed ​​ah, iyo tirada xawaaraha muujinaysaa dhaqaaq dhakhso ah ama mid gaabis ah. Tallaabadan ayaa button xagal yar in 0.5 iyo aad u hesho a version hoos of video YouTube ah. Riix badhanka Play in daaqadaha Xiisaha inaan fiirino ee YouTube video cusub.
Tallaabada 4. dhoofinta YouTube video ah mooshin gaabis ah
Waxaad sii wadi karo tafatirka YouTube videos. Marka dhan sameeyo, guji "Abuur" si loo badbaadiyo natiijada. Waxaad badbaadin karo video YouTube in kasta oo qaabab loo jecel yahay kombiyuutarka adigoo gujinaya "Qaabka". Haddii aad rabto in aad ka ciyaari YouTube video on iPod, iPhone, iPad, guji "Device" dooro qalab aad. Waxa kale oo aad la wadaagi karto video YouTube ilaa YouTube si toos ah ama gubi YouTube video inay DVD.
Video Tutorial: Ku dar Motion gaabis la Filmora Wondershare (asal ahaan Wondershare Video Editor)
> Resource > Video > Sida loo dar Motion u gaabiya YouTube Videos